Waa Koox Meel Kale U Socota? Miyaa La Soo Gaadhay Waqtigii Arsenal Laga Saari Lahaa Liiska Kooxaha Waa Wayn Ee Premier League? Arintan Ayaa Markaati U Ah. - Gool24.Net
Waa Koox Meel Kale U Socota? Miyaa La Soo Gaadhay Waqtigii Arsenal Laga Saari Lahaa Liiska Kooxaha Waa Wayn Ee Premier League? Arintan Ayaa Markaati U Ah.
Kooxda Arsenal ayaa is arkaysa iyaga oo ka hoos maray kooxda ay sida wayn London ugu xifiltamaan ee Tottenham kadib guuldaradii ay sababta iskugu noqdeen ee Spurs ka soo gaadhay waxaana jira taariikh madow oo Arsenal kulankan looga diwaan galiyay.
Arsenal waxay ahayd kooxdii sida sahlan guul u gaadhi kartay kulankii Tottenham laakiin qaladaad ay sameeyeen ciyaartoyda Gunners iyo dhamaystir la’aan weerarka ahayd ayaa Tottenham ciyaarta ku sii nagaysay waxayna ugu danbayn ciqaab adag mariyeen wiilasha Mikel Arteta.
Haddaba waxaa jirta arin ay adag tahay in la rumaysan karo isla markaana keenaysa in wax layska waydiiyo haddii Arsenal hadda lagu tilmaami karo in ay ka mid tahay lixda kooxood ee Premeir League ugu awooda badan.
Arsenal waxay hore uga mid ahayd afartii kooxood ee Premier League ugu awooda badnaa sanadihii ay afarta sare caanka ahaayeen waxayna kadib Arsenal qayb ka ahayd lixdii kooxood ee ugu sareeyay Premier league sanadihii la soo dhaafay.
Laakiin hadda waxay xogtu muujinaysaa in Arsenal ay noqotay koox aan lagu tirin karin lixda kooxood ee Premier League ugu awooda badan kadib markii ay ku soo fashilmeen in ay hal guul ah ka gaadhaan kooxaha lixda waa wayn intii lagu jiray 27 kii kulan ee ugu danbeeyay.
Arsenal ayaan hal guul ah soo gaadhin 27 kii kulan ee ugu danbeeyay ee ay la soo ciyaartay kooxaha Liverpool, Man United, Chelsea, Man City iyo Tottenham waxayna muujinaysaa sida ay Gunners u noqotay koox nugul oo saddexdeeda dhibcood ay kooxaha waa wayn ugu xisaabtamayaan sidii kooxaha yar yar.
Arsenal ayaa 27 kii kulan ee ugu danbeeyay ee ay ka hor timid kooxaha faceeda ah ee Premier League waxay soo heshay 10 babraro oo kaliya waxayna la soo kulantay 17 guuldaro waxayna muujinaysaa heerka ay marayso kooxda Emirates Stadium ka dhisani.
Arsenal waxay koobka Premier League kula tartamaysay Liverpool laakiin waxay hadda is arkaysaa iyada oo 43 dhibcood ka hoosaysa Reds, waxa kale oo ay Gunners 10 dhibcood ka hoosaysaa Chelsea oo kaalinta 3 aad ku jirta balse guuldarooyin badan la soo kulantay waqtiyadii ugu danbeeyay.
17 guuldaro oo Arsenal ka soo gaadhay shanta kooxood ee ay la soo xifiltami jirtay iyo in ayna hal guul ah soo gaadhin 27 kulan oo xidhiidh ah oo ay kooxaha waa wayn ka hor timid ayaa calaamata su’aal dul dhigaysa haddii ay Gunners gabi ahaanba luminayso in lixda waa wayn lagu tiriyo.
Tottenham ayaa awooday in ay kulankii 6 aad oo xidhiidh ah ay garoonkeeda guuldaro la’aan kaga jirto Arsenal waana rekoodhkii ugu fiicnaa ee labaad intii ay Premeir League ku soo xifiltamayeen.